Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Dilalkii John Granville iyo Abdelrahman Abbas Rahama
Dilalkii John Granville iyo Abdelrahman Abbas Rahama
Khartuum, Suudan | Janaayo 1, 2008
Janaayo 1, 2008, muwaadin Mareykan iyo Horumarrinta Caalamiga ee Mareykanka (USAID) iyo daroowalkiisa Abdelrahman Abbas Rahama oo Sudaani ah, waxaa lagu diley iyaga oo gurigooda u socda kana yimid dabaaldegga Habeenka Sanadka Cusub magaaladda Khartuum. Laba kooxood ayaa si gooni ah u sheegtey mas’uuliyaddii dilalkan: Kuwa soo go’ey al-Qaidada in the Lands of the Two Niles iyo Ansar al-Tawhid (Taageerayaasha Supporters of Monotheism).
Nidaamka sharciga ee Sudaan shan nin ayuu maxkamad ku qaadey oo lagu helo dambi ah in ay lug ku la’haayeen dilalka. Abdelraouf Abu Zaid Mohamed Hamza, Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed, Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad, iyo Mohanad Osman Yousif Mohamed waxaa lagu xukumey dilal lalmis ah, laakiin Xabsigii Khober ee Khartoum ayuu ka baxsaday sanadkiisii koowaad ee xukunkiisa dembiga. Waxaa la soo sheegey in Mohanad uu Maajo 2011 Soomaaliya ku dhintey. Abdelraouf mas’uuliyiinta Sudaan ayaa gacanta ku dhegtey. Makawi iyo Abdelbasit ilaa iyo hadda waa la la’yahay.
Abdelrahman Abbas Rahama, 39, wuxuu ku dhashay Juba, Sudan. Wuxuu shaqadiisa USAID bilaabey sanadkii 2004 isagoo ahaa xubnihi cusbaa ee Kooxda Jawaab-celinta Gargaarka Masiibooyinka ee Darfur, Suudan. Daroowalnimo ayaa lagu qorey inuu hawlgalka USAID/Suudan/Suudan bisha Nofembar 2005.
John Granville, 33, wuxuu ka soo jeedaa Buffalo, New York. In ka badan seddex sanadood ayaa wuxuu ka shaqeynaayay barnaamijyada dimoqraadiyadda iyo dowladnimada ee USAID, isaga oo koonfurta Suudaan ku qeybinayay kumanaan kun oo soolarka awooda raadiyowga, deegaan dagaalo bahdiley in ka badan labaatan sanadood, muwaadiniinta ku wargelinayay xuquuqdooda oona ka caawinayay diyaargarowga doorashooyinka. Granville wuxuu ahaa Iskaa-wax-u-qabsade (Peace Corps Volunteer) oo Cameroon joogey laga bilaabo 1997 ilaa iyo 1999 oo waxaa uu heley deeqda Fullbright (Fullbright fellowship) markaa ka diba inuu daraasaad madaxbanaan Cameroon ka sameeyo.
Macluumaadka laga heley qof markhaati ah awgeed ayaa waxay dhalisey in, laba gacan ku dhiigleyaal oo diley diblomaasi Mareykan ah ayaa xabsi daa’im lagu xukumey.